सुनको मूल्य ओरालो लाग्यो, १० दिनमा तीन हजार घट्यो
काठमाडौं । डेढ महिनाअघिदेखि लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्य पछिल्लो सातादेखि क्रमिक रुपमा घट्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बजारमा पर्न गएको हो । ...
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको जनता क्यापिटल लिमिटेडको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । जनता क्यापिटलको विहिबार संचालक समितिका अध्यक्ष सुजित कुमार शाक्यको सभापतित्वम...
काठमाण्डौ । सुनचाँदीको भाउ आज(बिहिबार) पनि घटेको छ । सुन बिहीबार तोलामा २ सय रुपैयाँ घटेर ७१ हजार ८ सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बुधबार स्थिर रहँदै सुन तोलाको ७२ हजा...
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । मंगलबार तोलामा ७१ हजारमा कारोबार भएको छापावाल सुन बुधबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो । यस्तै तेजावी सुन ७० हजार ७०० मा कारोबार भएको ने...
सीमा क्षेत्रमा भइरहने अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थ हाहाकार हुने दिन अब सकिए । बहुप्रतीक्षित एवं बहुउपयोगी नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। यो दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदे...
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई सूचना प्रविधि (आईटी) अडिट गर्न निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधिको सुरक्षाका विषयमा प्रश्न उठेपछि ...
काठमाडौं । फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो(फर्नेक्स २०१९) को सबै तयारी पुरा भएको छ । फर्नेक्सको आयोजक संस्था नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अनुसार एक्स्पोको सबै तयारी पुरा भएको छ । संघका महासचिव तथा स...
नागभुषण महादेव मन्दिरलाई जनता बैंकले गर्यो डेढ लाख सहयोग
काठमाडौं । जनता बैकंबाट नागार्जुन न.पा. वडा न. १ रानीवन स्थित नागभुषण महादेव मन्दिरको भौतिक संरचना सुधारको लागी रु १ लाख ५० हजार सहयोग प्रदान गरिएको छ । बैंकका नायव प्रमुख कार्र्यकारी अधिकृत सुजित ...
प्रभु बैंकको कालाबञ्जरबाट सेवा प्रारम्भ
सुनसरी । प्रभु बैंक लिमिटेडले आप्mनो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा मिति सोमबाट सुुुुनसरी जिल्लाको बराह क्षेत्र नगरपालिका वडा नं.५ कालाबञ्जरमा आफ्नाे १९५ औं शाखा कार्यालयको संञ्चालनमा ल्याएको छ । क...
सुनको मूल्य फेरी घट्यो !
काठमाडौं । सुनको भाउ आज(शुक्रबार) तोलामा १४ सय रुपैयाँ घटेको छ । हिजो प्रतितोला ७३ हजार ४ सय रुपैयाँ रहेको छापावाल सुन आज प्रतितोला ७२ हजार रुपैयाँ कायम भएको हो । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अन...
एटीएम ठगी प्रकरण : फरेन्सिक इन्भेष्टिगेसन गर्न समितिको सुझाव
एटीएम ठगी प्रकरणमा भएको कमजोरीका सम्बन्धमा गहिरो अध्ययनका लागि तत्काल फरेन्सिक इन्भेष्टिगेसन गर्न छानविन समितिले सुझाव दिएको छ । एटीएम ठगी अध्ययनका लागि गठित समितिले दीर्घकालीन र अल्पकालीन समस्याहरुक...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य, पूर्व अर्थमन्त्री एवम माननीय सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन हिजो राति(आइबार) १०:४८ मा त...
एनआईसी एशियाको एटीएम सेवा सुचारु
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको एटीएम सेवा गत आइतबारदेखि अवरुद्ध भएकोमा हाल उक्त एटीएम सेवा सुचारु भइसकेको बैंकले जनाएको छ । सेवा संचालनमा आएसँगै बैंकको एटीएम कार्ड बाहकहरुले एनआईसी एशिया बैंकको एटीए...
भारतले लगातार मन्दी झेल्न सक्दैन: पूर्वप्रधानमन्त्री सिंह
एजेन्सी । भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले देशको गिर्दाे अर्थव्यवस्था प्रति चिन्ता जनाएका छन । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितामरणले भारतीय अर्थतन्त्र ओरालो लागेको संकेत सँगै डाक्टर सिंहले भने...